टेलिकमले ल्यायो डाटाप्याकमा अफर - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
टेलिकमले ल्यायो डाटाप्याकमा अफर
प्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र २७, बिहीबार १३:५९
काठमाडौं २७ चैत्र । नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहमा नयाँ अफर ल्याएको छ । टेलिकमले मुलुकमा लकडाउन घोषणा हुँदा दिएको अफर पुन दोहोर्याएको हो ।
टेलिकमले जीएसएम सेवामा डाटा प्याक अन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा रु. १ सयमा १ जीबी डाटा खरिद गर्दा ३ जीबी डाटा बोनस स्वरुप प्राप्त हुनेछ र प्राप्त हुने बोनस कम्पनीको फोरजी नेटवर्कमा ५ दिनभित्र खपत गर्नुपर्नेछ । यसैगरी दोश्रो प्याकेजमा रु. २ सयमा २ जीबी डाटा खरिद गर्दा ८ जीबी डाटा बोनस स्वरुप प्राप्त हुनेछ र कम्पनीको फोरजी नेटवर्कमा ७ दिनभित्र खपत गरिसक्नु पर्दछ ।
यसरी रु. १ सयमा बोनससहित कुल ४ जीबी र रु. २ सयमा बोनससहित १० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिनेछ । २. कम्पनीकै नेटवर्क भित्र ९इल ल्भत० भ्वाइस कल गर्न जीएसएम र सीडीएमए सेवामा हाल उपलब्ध भ्वाइस प्याक खरिद गर्दा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । त्यस अन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा ४० मिनेटको भ्वाइस प्याक एक दिनका लागि रु. २५ मा खरिद गर्दा २० मिनेट बोनस उपलब्ध हुनेछ ।
यसैगरी दोश्रो प्याकेजमा १ सय ९० मिनेटको भ्वाइस प्याक सात दिनका लागि रु. १ सयमा खरिद गर्दा ९५ मिनेट बोनस उपलब्ध हुनेछ । यसरी रु. २५ मा एक दिनका लागि बोनससहित ६० मिनेट र रु. १ सयमा ७ दिनका लागि बोनससहित २ सय ८५ मिनेटको भ्वाइस सेवा प्राप्त हुन जनाएको छ ।
साथै जीएसएम मोबाइल डाटा सेवा र सीडीएमए मोबाइल डाटा सेवाको आधारभूत दरमा उपलब्ध गराइएको छुट क्रमशः ३० प्रतिशत र २७ प्रतिशत लकडाउन अवधिभर निरन्तर रहने छ । कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जना गरेको हालको विषम परिस्थितिमा माथि उल्लिखित व्यवस्थाबाट ग्राहकवर्ग तथा समस्त देशवासीलाई आफ्ना परिवारजन तथा मित्रवर्गसँग सञ्चार सम्पर्कमा रहन सहयोग पुग्ने अपेक्षा कम्पनीले गरेको छ ।
समयमै बीउ र मल उपलब्ध गराउन माग गर्दै राप्रपा पाँचथरले दियो कृषि ज्ञान केन्द्रमा धर्ना
पाँचथर । किसानलाई समयमै मल र बीउ उपलब्ध गराउन माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)
नेचासल्यानमा ४५ करोड ३३ लाख ६४ हजार र माप्यदुधकोशीमा ३७ करोड ८६ लाख ५३ हजारको बजेट पेश
सोलुखुम्बु। नेचासल्यान गाउँपालिकाले ४५ करोड ३३ लाख ६४ हजारको बार्षिक बजेट ल्याएको छ । आज
चर्को मूल्यवृद्धि विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चर्काउने एमालेका जनसंगठनहरुको निर्णय
काठमाडौं।नेकपा (एमाले) जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यवस्तु लगायतमा भएको चर्को मूल्यवृद्धि विरुद्ध आन्दोलनमा
वडाको निर्णय अनुसार थुलुङदुधकोशीको देउसा माबिले गर्‍यो विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क फिर्ता 118 views
कार्कीले गरे पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखालाई २० थान कुर्सी हस्तान्तरण 70 views
आज असार १५ गते,राष्ट्रिय धान दिवस मनाईंदै4views